होशियार ! कर्णाली राजमार्गका फलामे पुलहरु जीर्ण छन् - होशियार ! कर्णाली राजमार्गका फलामे पुलहरु जीर्ण छन्
२०७५, २५ माघ, 11:14:53 AM
जुम्ला । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतका फलामे पुल (बेलिब्रिज) जीर्ण बन्दै गएका छन् । फलामे पुलको आयु पाँचदेखि आठ वर्षसम्म हुने भएपनि १४ वर्ष पुराना त्यस्ता पुलमा अहिले पनि सवारीसाधन गुड्दैछ ।
लामो समयदेखि पुलमा निरन्तर गाडी गुड्ने र माटो थुप्रिएकाले पुलका सबै फलामे डण्डी खिएका छन् । उक्त राजमार्गअन्तर्गतको कालिकोट र सेरीघाट तिलानदी माथिको पुल र जुम्ला र कालिकोट सिमानामा पर्ने हिमा नदीमाथिको फलामे पुल जीर्ण भइसकेको छ । पुलमा कसिएका कतिपय नट झरिसकेको अवस्थामा पनि गुड्ने गाडीको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
रारा आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटक पनि यो पुलको अवस्था दयनीय भइसकेको बताउँछन् । दिनहुँ कर्णाली राजमार्ग भएर आउने उनीहरू पुलको अवस्था देखेर भयभित हुन्छन् । तिला कर्णाली यातायात प्रालिका सचिव लक्ष्मीबहादुर रोकायाका अनुसार पक्की पुल नबनेको र फलामे पुलको आयु पनि सकिसकेको छ तर पनि गाडी गुडाउन बाध्य छौँ । उक्त राजमार्गअन्तर्गत अन्य दुई दर्जन पुल पनि अलपत्र हुँदा पनि कसैको चासो नरहेको उनको गुनासो छ ।
यस राजमार्गमा त्रासमै चालकले सवारीसाधन चलाइरहेका छन् । किला–काँटा फुस्किएर फलामे पुल जीर्ण भइसक्दा पनि पुलमाथि गाडी गुडाउनुपरेको चालक राजबहादुर रावलले बताए ।
दूधकोशीमा बेलिब्रिज बन्ने भएपछि स्थायीवासी खुशि